जीवनको लक्ष नै दिगो सामुदायिक विकास
इलाम, १९ प्ुस
यसपटक लाई पनि गणना गर्ने हो भने डाक्टर बेरी इलाम आएको अठ्तिसौँ पटक भयो । यसअघि १३ महिना पहिले नामसालिङ सामुदायिक बिकास केन्द्र (एनसीडीसी) इलाम, सिम एन र इलाम नगरपालिका कार्यालय इलामले नोभेम्बर २ र ३, २०११ मा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ग्रीन सिटी कार्यशालामा भाग लिन इलाम आएका थिए । इलामे जनतामाझ डाक्टर बेरी भनेर चिनिएका मेडिकल डाक्टर वेरी विएलेक ३८ बर्ष पहिले इलामेहरुबाट, अझ भनौ नामसालिङवासीबाट पाएको माया महसुस गर्न बर्षेनी इलाम आउँछन् । इलाममा दिगो सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरु नजिकबाट नियाल्छन् ।
दिगो सामुदायिक विकासका विषयमा अध्ययन गरेका डा. बेरी तत्कालिन नामसालिङ माविमा पिसकोर भोलेन्टियरको रुपमा विसं. २०३१ सालमा जीव विज्ञान र गणित विषयको शिक्षकको रुपमा आएका थिए । ‘नामसालिङको एउटा चिप्लो बाटोमा दुध बोकेर हिड्दै गर्दा चिप्लिएर लडेको क्षण नै मेरो जीवनको महत्वपूर्ण क्षणमध्येको एक हो ।’– डा. बेरी सम्झन्छन्, ‘त्यतिबेला लडेर मेरो दुध नपोखिएको भए सायद त्यो बाटो हामी मिलेर बनाउदैनथ्यौ होला, अनि सामुदायिक दिगो विकास योजनाको विषयमा छलफल नै हुदैन थियो होला । तीन महिना तथा दिनको दुइ घण्टा स्थानीयले बाटो बनाउन समय खर्चिएर हामीले बाटो बनायौ । ३७ बर्ष पहिले मसहित स्थानीयले बनाएको त्यो बाटोमा मैले मेरो छोराछोरीलाई हिडाउन पाउदा मैले आँशु थाम्न सकिन ।’ उसबेला सामुदायिक विकासको अवधारणा योजनाबद्ध थिएन । डा बेरीले स्थानीय सहकर्मी होमनाथ अधिकारी तथा अन्य साथीहरुसँग मिलेर नामसालिङको सय बर्षे दिगो सामुदायिक योजना बनाए । यसलाई संस्थागत बनाउन तथा बैध रुप दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा आएर दर्ता गरियो, नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्रको नाममा । २०४४ सालमा खेमराज नेपालले एनसीडीसीलाई गरेको सहयोगको कारण एनसीडीसी अझ अघि बढेको बेरी सम्झन्छन् ।
डा. बेरी नभएको भए आज एनसीडीसीको कल्पना पनि नहुने एनसीडीसीका प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार होमनाथ अधिकारीले बताए । एनसीडीसीका सम्बन्धितहरु डा. बेरीलाई एनसीडीसीका पिता मान्छन् । एनसीडीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिराकाजी घले भन्छन्, ‘डा. बेरी दिगो सामुदायिक विकासको प्रणेता हुन्, दिगो सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा उनले ३१ सालमा बनाएको योजना सरकारले हालमात्र कार्यन्वयन गर्दैछ ।’ बेरी पनि भन्छन्, ‘मेरो जीवनको लक्ष नै दिगो सामुदायिक विकास हो ।’ कुनैपनि सामुदायिक विकासको काम प्लालिङ नभई गरियो भने असफल हुनेमा बेरी विश्वास राख्छन् । सय बर्ष पछिको समयलाई मध्यनजर गरेर विकासको योजना बनाउनुपर्नेमा बेरी जोड दिन्छन् । डाउन टु टप एप्रोचमा योजना बनाएमात्र सफल हुनेमा डा. बेरी विश्वास गर्छन् । समुदायको मानिसहरुको आवश्यकताको पहिचान गर्नु, उनीहरुको मन बुझ्नु र उनीहरुको दिगो विकासको लागि योजना बनाउनुले मात्र आयोजनाहरु सफल हुने र समुदायको हित हुने बेरी बताउँछन् । नेपालीहरुको एकताको कारण नै दिगो सामुदायिक विकासको अवधारणा यहाँका मानिसहरुमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बेरी बताउँछन् । सामुदायिक विकास गर्न समुदायको सहभागीता महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् ।
सामुदायिक विसकामा समुदायको सहभागीता भएन भने ‘दिएको कुरा थापेर खाने, अल्छे मनोबृत्ति’ ले बढवा पाउने भएकोले सामुदायिक योजना बनाउदा समुदायको सहभागीतालाई जोड दिनुपर्ने बेरीले बताए । दिगो सामुदायिक आयोजना बनाउँदा स्वास्थ, शिक्षा, महिला विकास, पानी र शक्ति, यातायात र सञ्चार, गाउँ र बजार योजना, सुशासन, अर्थतन्त्र र कृषिलाई ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्ने उनले बताए । १३ महिना पहिले इलाममा आयोजित हरीत नगर कार्यशालामा पनि बेरीले १० वटा क्षेत्रहरुमा समुह छलफलमा इलामको सयबर्षे दिगो सामुदायिक विकासको योजना बनाउनको लागि सहजिकरण गरेका थिए । नेपाललाई सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले विसं. २०४४ सालमै क्यानडामा बेरीले नेपाल सामुदायिक विकास प्रतिष्ठान नामको संस्था दर्ता गरि हालसम्म नेपालको सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छन् । कोलाराडो विश्वविद्यालयमा ११ बर्ष अघि गठन गरिएको इन्जिनियर्स विथआउट बोर्डर नामको संस्थाबाट सन् २००७ देखि बर्षेनी इलाममा इन्जिनियरका विद्यार्थीहरु ल्याई विकासे कार्य गराउने पनि डा. बेरी नै हुन् । विसं. २०३१ सालमा आफुले देखेको सपना पुरा हुदै गएकोमा डा. बेरी सन्तुष्ट छन् तर पूर्ण सन्तुष्ट भने छैनन् । नेपाली भाषा र देवनागरी लिपी बुझ्ने डा. बेरी भन्छन्, ‘म कलियुगमा जन्मिएको मान्छे भएको कारले होला, पूर्ण सन्तुष्ट भने कहिल्यै हुन सक्दिन ।’
६२ बर्षिय डा. बेरीले उसैबेला नामसालिङमा प्रावि भवन, स्वास्थ्य उप चौकी, तथा विद्यालयमा शौचालय बनाएका थिए । ३८ बर्षपछि नामसालिङमा १३ सयबटा शौचालय बनेको बताउँदै बेरी भन्छन्, ‘ढिलै भएपनि सामुदायिक विकास भएको छ ।’ दिगो सामुदायिक विकासलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दा बेरीले भने, ‘स्वास्थ्यको स्थिति सुधार गर्न गाउँमा गएर सोध्यो भने गाउँलेहरुले डाक्टरको माग गर्छन्, म भन्छु डाक्टर चाहिदैन, त्यहाँको पानी सफा होस्, स्वस्थ्य बस्तु प्रयोगको चेतना सबैमा होस् ।’ मनका धनी डा. बेरी क्यानेडियन नागरिक हुन् भने उनीसँग अमेरीकाको समेत नागरीकता छ । उनी कोलाराडो विश्वविद्यालय पढाउँछन् । आफु कलियुगमा जन्मिएको कुरा पटक पटक दोहो¥याउने डाक्टर बेरी भविष्यमा सत्ययुग पुन ल्याउन सकिनेमा विश्वस्त हुदै भन्छन्, ‘नाति पनातिको समयमा सत्ययुग ल्याउन सबैजना हात मिलाई दिगो सामुदायिक विकासको लागि काम गरौ ।’
सुन्तला बेचेको रकमले समाजसेवा
भिम दहालः जसले पक्रे बबरमहल बमकाण्डका नाइके
‘इच्छाशक्ति भए सबै कुरा सहज’
खानाको स्वादले चिनिदैछन् केसी
‘क्षितिजदेखी कुरा अर्को छ सम्म’